MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 893
>5th June 2011 - MoeMaKa Radio
>different Burmese exile groups
> အဖွဲ့အစည်းတွေ သိပ်များနေသလား ဇာနည်ဝင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်သားတွေ မညီညွတ်ကြဘူး၊ အဖွဲ့တွေ အများကြီးဖွဲ့ထားကြတယ်လို့ မထင်ဘူးလား။ နှစ်ခုလုံး ဟုတ်ပါတယ်။ မညီဘူး၊ အဖွဲ့တွေ များတယ်။ ဘယ်သူတွေညီကြသလဲဆဒန်ဟူစိန်ကို...
> ဂီတပညာရှင် မာမာအေး ရန်ပုံငွေပွဲတွင် အထူးသီချင်းစီဒီ ဖြန့်ချိမည် မိုးမခ ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ လာမည့် စနေနေ့၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဆန်ဖရန်စ္စကိုဘေးဧရိယာက မြန်မာဂီတချစ်သူများရဲ့ အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ “သီချင်းဆိုရအောင်” ဆိုတဲ့...
> ပတ္ထနာဉာဏ်ဦးမောင်ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ တသက်လေလားညှိုးတရားလည်းထိပါစေတော့ တရက်လေလားဝိုးတဝါးလည်းရှိပါစေတော့ တရားမပျက်မှားမဖက်တဲ့သင့်အိပ်မက်တွေဆက်လက်ဝေ ကမ္ဘာမြေကြီးငြိမ်းချမ်းစေ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
> Cartoon Maung Yit – The World is celebrating 60 year of human rights day and still Burmese are...
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၇)ဆရာဇော်ဂျီ၏ ကဗျာ ၂ ပုဒ်ထိန်လင်းဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ စာပေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါခဲ့သလို စာပေပညာရှင်တွေရဲ့ စာပေနဲ့ နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုတွေကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အမျိုးသားစာဆို၊...
> မိတ်ဆွေများထံမှ ပေးအပ်လိုက်သောအရာ စိုးသင့်ဆွေဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈ မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ လောကမှာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အရာပါ တဲ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သတ္တဝါများဟာ ရေသတ္တဝါတွေဖြစ်ဖြစ်၊ ကုန်းနေသတ္တဝါတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် မျိုးတူရာ စုပေါင်း နေထိုင်တဲ့...
Page 893 of 951«1...891892893894895...951»